﻿	Layered Dorito Casserole - Ezi Ntụziaka
swiss steak Ezi ntụziaka na ite ite
mfe aki oyibo ude ude achịcha
ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie dum ọkụkọ
kedụ ka ite ozigbo si ewepụta
esi obụpde nsen ke denver
Layered Dorito Casserole bụ mfe ezinụlọ ọkacha mmasị Ntụziaka! A na-eme ka anụ ehi na-edozi ahụ site na taco sizinin na salsa iji mepụta ndochi dị ụtọ. Rọ nke Doritos na-emepụta ihe na-atọ ụtọ maka akpu a nke a na-etinyezi na chiiz ma sie ya ruo mgbe aja aja na nro. Anyị na-elu ya anyị ọkacha mmasị taco n'ike mmụọ nsọ toppings!
Ọkpụkpọ a bụ ihe dị egwu !! Na ee, ọ dị mma ịnwe Doritos maka nri abalị otu oge, ọkachasị na uzommeputa a !! (Gbakwunyere anyị tinye ya na letus & tomato, nke ahụ ga-agụta maka ihe ziri ezi?)).
Nke a na uzommeputa nwere dabere ala beef seasoned, esiri ya na salsa na weere na utoojoo ude maka a na-atọ ụtọ ndochi. N'ezie, njuputa ahụ dị ezigbo mma nke na ọ na-eme nnukwu ihe ntanye maka ibe tortilla ma ọ bụ bụ ihe zuru oke zuru ezu iji kechie na achịcha tortilla na ọkacha mmasị gị taco toppings!
Ọ bụ ezie na ejirila m anụ bekee, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ casserole ọkụkọ, ị nwere ike dochie iko abụọ nke ịkwa nke ọkụkọ esi nri n'ọnọdụ ala beef. Ogwu ojii ma ọ bụ ọbụna otu agwa nke eghere eghe na-eme nnukwu mgbakwunye na ndochi ahụ. ’Ll ga achọ mkpokọta ihe dịka iko 4 1/2 nke Doritos dị ntakịrị ntakịrị ka m wee jiri akpa ezinaụlọ (Approx 17oz). Ọ bụla ekpomeekpo na-arụ ọrụ mana ejiri m Nacho Chiiz ma ọ tọrọ ụtọ!
4.89site na97votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nriiri ise Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere 5 Nkeji Ọrụ6 servings Mkpụrụ anụ ehi na salsa nwere oge na -emepụta ihe zuru oke maka ịkpụ na chiiz na Doritos. Bipute Ntụtụ
▢1 ezinụlọ size akpa Doritos, ọ bụla flavor (M ji Nacho Chiiz)
▢1 yabasị okpokoro
▢1 iko ihendori
▢1 ngwugwu obere sodium taco sizinin ma ọ bụ arụrụ n'ụlọ taco sizinin
▢1 iko kriim gbara ụka
▢1 ude nke ọkụkọ ma ọ bụ ero ofe
▢abụọ iko shredded chiiz (M na-eji tex mex ngwakọta ma ọ bụ cheddar)
▢Kriim gbara ụka
Nri anụ ehi na yabasị na galik ruo mgbe enweghị pink ga-anọgide. Igbapu abụba ọ bụla.
Add taco sizinin, salsa na ⅓ iko mmiri. Esi nri ruo mgbe thickened, ihe dị ka nkeji 5 ma wepu ya n’ọkụ.
N'ime nnukwu efere, jikọta ngwakọta beef, ude gbara ụka, ofe na 1 iko cheese.
Dịtụ azọpịa Doritos (ọ bụghị kpam kpam, ị chọghị nsị). Layer 1 ½ iko Doritos na ala nke efere casserole 2 qt. Top na ½ nke ngwakọta beef. Tinyegharịa n'ígwé. N'ikpeazụ tinye ya na iko 1 ruo 1 ½ iko Doritos na cheese fọdụrụ.
Gba otu mpempe akwụkwọ nri na ịgba nri ma kpuchie casserole.
Ime 30 nkeji kpuchie, wepu foil na akpọrọ akpọghe maka mgbakwunye nkeji 20 ma ọ bụ ruo mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma na-afụ ụfụ. Top na letus, tomato na oliv ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ozi nri na-enye bụ atụmatụ ma ga-adịgasị iche dabere na usoro esi esi nri na ụdị nke ngwa eji. Nutrition gbakọtara na-enweghị nhọrọ toppings.
Calorisị:Ugboko 560,Carbohydrates:36g,Protein:26g,Abụba:33g,Abụba Ajuju:iri na otug,Cholesterol:96mg,Sodium:985mg,Potassium:494mg,Eriri:1g,Sugar:4g,Vitamin A:715IU,Vitamin C:Ugboro abụọmg,Calcium:Ogbe 255mg,Iron:2.2mg
Isiokwuọla edo casserole N'ezieCasserole Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
More Casseroles ’ll ga-ahụ n'anya
N'ụdị Spaghetti Casserole
Pizza Pasta akpọọ nkụ